Sales Representative (Regional_Myit Kyi Nar) at I.P. Service and Solution Company Limited | MyJobs
/ Sales Representative (Regional_Myit Kyi Nar)
Sales Representative (Regional_Myit Kyi Nar)
Able to travel with motorbike around Myit Kyi Nar
Location : Rest of Myanmar
Job Level : Executive level
Reporting Line : Sales Supervisor (Retails)
Vacant for : 1 person (Able to travel with motorbike around Myit Kyi Nar)
To provide full sales operational activities within assigned region and coordinate with sub-distribution partners. Responsible for for sales growth, acquiring new customers and maintaining good relationships with both potential and existing customers within assigned region. To build trust and act as support for prospects, ensuring they lead to potential future sales.
· Travel within sales territory (with motorbike) to meet prospects and customers.
· Drive sales growth and meet/exceed the target in assigned territory by acquiring new customers and expanding sales volume and SKUs.
· အလားအလာကောင်းများ၊ customer များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အရောင်းနယ်မြေအတွင်း (ပဲခူးမြို့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မြို့များ) ဆိုင်ကယ်မောင်း၍ သွားလာဆောင်ရွက်ရန်။
· Push for market reach, increase sales volume, and expand SKUs order within assigned region.
· ရောင်းအားတိုးတက်စေရန်နှင့် target ပြည့်မှီ/ကျော်လွန်စေရန် customer အသစ်ရှာဖွေခြင်း၊ ရောင်းအားမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် SKU အသစ်များတိုးချဲ့ရောင်းချခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
· Coordinate with store customers and manage products visibility.
· စတိုးဆိုင်များနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး Product/ထုတ်ကုန်များကို မြင်သာအောင်စီမံရန်။
· Effectively communicate procedures, policy, and promotions onatimely basis to retailers.
· Customer များအား လုပ်ငန်းမူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် Promotion အစီအစဉ်များကို ထိရောက်ရှင်းလင်းစွာ သိရှိစေရန် အသိပေးဆောင်ရွက်ရန်။
· Conduct calls and face-to-face meetings with customers daily.
· Customer များနှင့်နေ့စဉ် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်။
· မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ် customer များနှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
· အရောင်းဦးဆောင်မှုများ၊ customer အကောင့်များအားလုံးကို မှတ်တမ်းပြု၍ ထိန်းသိမ်းထားရန်။
· Educate customers on how products or services can benefit them financially and professionally.
· ကုမ္ပဏီ Product အရောင်းနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုသည် Customer များ၏ ငွေကြေးကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းအပေါ် အကျိုးပြုပုံများကို အသိပညာပေးရန်။
· Sell the company’s products or services to customers within your given territory
· သတ်မှတ်ပေးထားသော အရောင်းနယ်နိမိတ်အတွင်း product များတိုးချဲ့ရောင်းချရန်။
· Monitor the company’s industry competitors, new products, and market conditions to understandacustomer's specific needs.
· အပြိုင် product များ၊ product အသစ်များ၊ စျေးကွက်အခြေအနေများနှင့် customer လိုအပ်ချက်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာတင်ပြရန်။
· Provide daily recap of results and accomplishments to the Key Account Executive (Regional/SD).
· နေ့စဉ်ရလာဒ်များနှင့် လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာ Key Account Executive အား စုဆောင်းတင်ပြရန်။
· Submit others timely necessary sales report to Key Account Executive (Regional/SD) and Assistant Sales Manager (Regional/SD).
· Key Account Executive နှင့် Sales Manager ထံသို့ လိုအပ်သော report များကို သတ်မှတ်ချိန်အလိုက် အချိန်မီစုစောင်းတင်ပြရန်။
· Work closely with marketing department to help build the brand.
· Marketing ဌာနနှင့်ပူပေါင်း၍ Branding ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်။
· Sales Manager မှ တာဝန်ပေးသော အခြားအရောင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်။
· Must be able to use own or self-arranged motorbike (Additional motorbike usage and maintenance benefits will be specified and given monthly)
· ဆိုင်ကယ် ကိုယ်ပိုင်ဖြင့် (သို့မဟုတ်) မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရမည် (ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုမှုခံစားခွင့်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခံစားခွင့်များ လစဉ်သတ်မှတ်ထပ်လောင်းပေးပါမည်)
· Bachelor’s degree will be added advantage
· Sales experience in FMCG company will be added advantage
· FMCG ကုမ္ပဏီတွင်အရောင်းအတွေ့အကြုံရှိဖူးသူ အခွင့်အရေးသာမည်။
· Familiar or quick learning skills of territory’s roads, streets, retails shops, routing plans, etc..
· Supportive minded and willing to work as team player
· Self-starter and willing to work independently
· ပံ့ပိုးကူညီလိုစိတ်၊ အသင်းအဖွဲ့စိတ်ရှိပြီး ကိုယ်တိုင်အစပြုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရပ်တည် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းရှိရမည်။
· Able to travel as much as required within assigned region as well as visit Yangon office monthly.
· သတ်မှတ်ထားသောဒေသအတွင်းလိုအပ်သလို ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားလာနိုင်သလိုလစဉ်ရန်ကုန်ရုံးခန်းသို့လည်း ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။
· Others skills such as strong interpersonal, communication, active listening, detail orientation, etc..
· ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ခြင်း၊ စကားပြောကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ သိလွယ်၊ နားလည်လွယ်ပြီး ကောင်းစွာနားထောင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အလေးထားဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းများ ရှိရမည်။